I-Solar Panel, Inverter Power, I-Controller ye-Charge Charger, I-PWM Controller, Abakhiqizi base-China nabathengi
I-Modified Sine Wave Inverter
Umlawuli we-PWM Solar Charge
I-Pure Sine Wave Inverter
Umlawuli Wokukhokhisa Solar
I-Solar Lighting System
Imikhiqizo emihle ye-optoelectronic
I-carbon ephansi, ukuvikela imvelo, ukugcina amandla.
Ebusuku, kusetshenziswa izincwadi zokufunda izinhlelo zokukhanya
ama-panels asetshenziswayo ekhaya
ama generator esondelene ne-solar
izinkinobho zamandla elanga
amandla elanga lamakhaya
amandla ekhaya elanga
uhlelo lwelanga lasekhaya
Zhejiang Longchi Technology Co, Ltd. iqoqo lokuthuthukiswa komkhiqizo welanga, ukukhiqizwa, amasevisi okuthengisa kanye nokwakhiwa kwamabhizinisi amasha amandla. Ukuphathwa komkhiqizo okuqinile, ikhwalithi yomkhiqizo nokuzinza, kudluliselwe isitifiketi se-ISO9001 yokuphathwa kwekhwalithi, imikhiqizo eyinhloko ngokubika kwekhwalithi ye-SGS, isitifiketi se-CE, umbiko we-ROHS futhi uthole isitifiketi esifanele.
Lesi sitshalo sihlanganisa indawo yamamitha ayisithupha e-56667, indawo yokwakhiwa kwamamitha ayisigidi angu-55935, enezindleko ezibhalisiwe ze-RMB 20million.
Imikhiqizo eyinhloko yi-modules ye-PV yelanga, isistimu yokukhiqiza amandla yelanga, i-80% yemikhiqizo ithunyelwa e-Afrika Yurophu, eNyakatho Melika, e-Australia. iMiddle East, eningizimu-mpumalanga ye-Asia, edunyiswa ngamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe, "empeleni i-carbon carbon yokuvikela imvelo yamandla okuvikela ama-photoelectric imikhiqizo". Le nkampani inebabeli abaningi ekhaya nakwamanye amazwe, inqola inqwaba yokuqashelwa kwamakhasimende nokudumisa. ukuzimisela ukukhonza inkonzo yokuqala ekilasini namakhasimende amasha nabangaphandle asekhaya nabangaphandle basebenza ngezandla ukudala impilo "yelanga". Funda kabanzi
Ibhizinisi lomhlaba wonke
Sinikeza ngezinsiza ezinhle zokuxhumana kanye nokusekelwa kwemikhiqizo kumakhasimende avela emhlabeni wonke.
Ukuze unikeze isevisi esheshayo, esabelayo futhi ebiza imali, ukuze ihlangabezane nezidingo zabasebenzisi bethu benkonzo.
Sisiza ngaphezu kwamakhasimende we-3,000 global-ngaphezulu kuka-30% wamakhasimende we-brand-leading emhlabeni ezindaweni zabo zebhizinisi futhi shintsha idatha yomphakathi ibe yizinqumo zebhizinisi ezihlakaniphile.
I-solar energy i-effulgent isisindo esincane nokufudumala okuvela ku-Sun okulawulwayo okusebenzisa ukuhlukahluka kobuchwepheshe obuguqukayo obufana nokushisa kwenkanyezi, i-photovoltaics, inkanyezi yamandla eshisayo, ukuklanywa kwenkanyezi, izitshalo zamandla kagesi uketshezi namakhemikhali okufakelwa ... Funda kabanzi
Kuzoze kube nini ama-panels ahlala khona
Iminyaka engu-25 (noma ngaphezulu). lokhu kungaba yisiqinisekiso esivamile sebhizinisi esivela kumenzi wabalingani bomuntu oyedwa. Eqinisweni, izinkampani zenkanyezi zizohlala isikhathi eside kakhulu kunalokho: isiqinisekiso ngokuvamile siqinisekisa ama-panels angasebenza ngaphezulu kwamashumi ayisishiyagalolunye we-potency yabo elinganisiwe lapho sekuyiminyaka engamashumi amabili nanhlanu. Ucwaningo olwenziwa yi-NREL lubonisa ukuthi inqwaba yamapaneli namanje injini ... Funda kabanzi
Ngingayidinga mangaki amapaneli e-solar ekhaya lami?
Ukunquma ukukala kwesistimu yakho yamandla elanga kuqala ngombuzo olula: yiziphi amapaneli ezinkanyezi engizidingayo? Njengoba umphakathi jikelele ufisa ukunikeza amandla okwanele ekuqedeni ngokuphelele ibhilidi labo kagesi, isinyathelo esiyinhloko sinquma ukuthi yisiphi isistimu yesayizi engakwazi ukuvula amandla anele ukufeza ukusetshenziswa kwakho kweyunithi ... Funda kabanzi
I-Panels Panels isebenza kanjani?
Njengoba uhlinzekwa njengendlela yokunikezela kwamandla emethembisayo iminyaka eminingi, izinkanyezi zezinkanyezi zemikhakha yemikhakha kanye nezinkomba ezingenqenqemeni, futhi lula ukugcina i-orbiter inikwe amandla. Kodwa-ke noma kunjalo izinkanyezi zisebenza? Kulula nje, i-solar array isebenza ngokuvumela ama-photons, noma izinhlayiya zokushisa kwelanga, ukugubha ama-electron mahhala kuma-athomu, okwenza ukugeleza kagesi. ... Funda kabanzi
I-FAX.: + 008613615725616
Yengeza.: NO.20 Guodao North Road, i-Industrial Zone yase-Shangqiang, i-Daixi Town, isifunda sase-Wuxing, i-Huzhou City, esifundazweni saseZhejiang.
Copyright © 2019 I-Zhejiang Longchi Technology Wonke Amalungelo Agodliwe.